5 चीजहरू तपाईलाई सिस्को CCNA प्रमाणीकरण बारे जान्नुपर्दछ यो
16 नोभेम्बर 2017
5 चीजहरू तपाईलाई सिस्को CCNA प्रमाणीकरणको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ
सिस्को CCNA प्रमाणीकरण
CCNA प्रमाणीकरण के हो?
सिस्को CCNA प्रमाणीकरण को एक टुकडा किस प्रकार को हो?
सिस्को CCNA प्रमाणन परीक्षा लिने लागत के हो?
म कहाँ मुक्त CCNA अध्ययन गाइड पत्ता लगाउन सक्दिन?
CCNA प्रमाणीकरण परीक्षाको लागि योजना कसरी गर्ने?
समय र सतर्क काम एक पेशेवर सर्टिफिकेट पुर्याउने मा राखिएको छ निर्भरता समाप्त हुन्छ लामो समयसम्म लाभदायक हुन्छ। सिस्को CCNA प्रमाणीकरण एक यस्तो कार्यक्रम हो जुन एक विशिष्ट क्षेत्रमा व्यक्तिको व्यावसायिक क्षमताहरू पुष्टि गर्न र निम्न स्तरमा समर्थनको कारणले मद्दत पुर्याउन सक्छ।
CCNA सिस्को प्रमाणित नेटवर्क एसोसिएट, स्व-हिज्जेबाउन्ड प्रमाणन कार्यक्रमको रूपमा कन्डिस गरिएको छ। बिन्दुमा जब एक व्यक्तिलाई प्रभावकारी ढंगले योग्यता प्राप्त गरेको छ, तिनीहरूलाई प्रशासनिक र प्रणालीमा योग्य क्षमताको रूपमा देखा पर्दछ।
प्रमाणीकरण परीक्षण जाँच गरिएको छ र प्रचलित आईटी फर्म सिस्को द्वारा दिइएको छ। हरेक उद्योगमा व्यावहारिक रूपले व्यवस्थितिका व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ, योग्यता आईटी प्रोफेसरहरू बीचको धेरै प्रचलन प्राप्त गरेको छ र लगातार सबै भन्दा राम्रो प्रमाणपत्र प्रोग्रामहरू बीचको एक उत्कृष्टता हो।
जबकि कार्यक्रम अब एक वर्ष को लागी लगभग छ, सिस्को को संगठन यस प्रमाणन कार्यक्रम को पछि रहेको छ र यस विषयों को लक्ष्य संग बदल दिए छ कि उनि बेहतर उद्योग पैटर्न बदलन को बदलन मा बदल दिए।
एक उल्लेखनीय रेडियस वर्ष 2013 मा गरियो जब उनीहरूले विभिन्न रोजगारी विशेष परीक्षाहरू बनाएका थिए जसले पेशेवरहरूलाई विशेष दायरामा केही विशेषज्ञता पाउने।9विविध सीसीएन विषयवस्तुका योगहरू हाल पहुँचयोग्य छन् र तपाईका भविष्यका उद्देश्यहरू हेर्न उपयुक्त विशेष शीर्षक लिन सक्नुहुन्छ।
CCNA क्लाउड - विषयलाई हाइफिक रूपमा क्लाउड विकास, स्टकप्लिङ र सिस्को क्लाउड व्यवस्थाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। क्लाउड नवाचारको साथ असाध्यै सामान्य हुनु हो, यो धेरै परीक्षण लिङ्कहरू द्वारा एक महत्वपूर्ण स्ट्रीमको रूपमा देखा पर्दछ।
CCNA सहयोग - आईपी ​​संचारमा काम गर्ने कामदारहरू, क्षेत्रहरू मिलाउन सहयोग चयन गर्न सक्ने छनौट गर्न सक्छन् जुन आवाज, डेटा, भिडियो र पोर्टेबल अनुप्रयोगहरूसँग पहिचान गरिएका विभिन्न नवाचारहरू टाढा टाढाको पाठ्यक्रम हो।
CCNA साइबर ओप्स - प्रमाणपत्र समाप्त भएपछि एक पेशेवर को संकेत गर्दछ जो एक साइबर सुरक्षा मास्टर एक संघ को उन्नत सुरक्षा को निरीक्षण को लागि सुसज्जित छ।
CCNA डाटा केंद्र - यस विशिष्ट परीक्षणमा हल्लाएका विषयहरू एक डेटा केन्द्र निर्माण, प्रणाली, डाटा प्रशासन, गियर र हार्डवेयर राख्ने योजना बनाउँदछ।
CCNA औद्योगिक - प्रमाणीकरणले व्यक्तिलाई तेल, ग्याँस, बिजुली र संयोजन क्षेत्र सहित औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू प्रभावकारी रूपमा चलाउन आवश्यक प्रणाली व्यवस्थापन र अपरेसनहरू बुझ्न सक्षम बनाउँछ।
CCNA रूटिंग र स्विचिंग - सिस्को सोचेको केन्द्र विषय - यो निरपेक्ष आवश्यकता हो सबै प्रणाली निर्माणको लागि मान्यता छ र एक मौलिक परीक्षण हो जुन कुनै पनि प्रणाली पेशेवर ले लिन सक्छ।
CCNA सुरक्षा - यस कार्यक्रम समाप्त गर्ने व्यक्तिले डेटा सुरक्षित गर्न पर्याप्त जानकारी पाउन, यसको पहुँच हेर्न, साझेदारी र उद्योगको लागि संरक्षित उन्नत नींव एकत्र गर्न मद्दत गर्न सक्छ।
CCNA सेवा प्रदायक - पाठ्यक्रम जो सेवा विशेषज्ञहरूले सेवाको रूपमा सङ्गठनहरूलाई मद्दत गर्नका लागि काम गर्ने व्यक्ति द्वारा कार्य समाप्त हुन्छ। पाठ्यक्रम समाप्त गर्न, तिनीहरू वर्तमान प्रशासन र प्रणाली व्यवस्थापनमा बहादुरी र ठोस मोडको आवश्यकता पर्दछ।
CCNA वायरलेस - सबै वायरलेस प्रणाली प्रशासन नवाचार संग सम्बन्धित व्यक्तिहरु लाई सुनिश्चित गरिन्छ जब पेशेवर ले यो परीक्षण प्रभावी ढंग देखि समाप्त गर्दछ। तिनीहरू व्यवस्थित गर्दै, साइन गुणको अवलोकन र सुरक्षित ताररहित ढाँचा सेटअप गर्न चार्ज छन्।
प्रत्येक CCNA प्रमाणीकरण परीक्षा को विशेष रूप देखि प्रयास गर्नु पर्छ। सिस्कोसँग प्रति 295 प्रति परीक्षाको CCNA परीक्षा लागत छ। अनुमानित जिन्दगीमा तपाईले बाँचिरहनुभएको जिल्लामा उल्ट्याउन सक्छ, दर र फरक चर परिवर्तन गर्दछ। परीक्षाको लागि आवेदन गर्नु अघि आधिकारिक साइट जाँच्न यो अचम्म छ।
नि: शुल्क खोज्दै CCNA अध्ययन गाइड वेब मार्फत तपाईलाई सोचेको जस्तो लाग्छ सतावटको रूपमा। त्यहाँ केही सम्पत्तिहरू र परीक्षण सेवा प्रदायकहरू छन् जसले हरेक गाइड आधारभूत आधारलाई निःशुल्क प्रदान गर्न सक्छ।
जबकि यी केही गाइडहरू डाउनलोड योग्य जडानहरूको रूपमा अनलाइन पहुँचयोग्य छन् YouTube र प्राविधिक दिशा साइटहरू मार्फत, तपाइँ समान रुपमा संगठित संगठनहरूको प्रस्तावित माध्यमिक परियोजनाहरू स्वीकार गर्न सहमत हुनुहुन्छ। यस्ता कोर्स मद्दतहरू स्वीकार्नको लागि सबैभन्दा हालको प्राप्त CCNA अध्ययन गाइड जस्तै सिस्को परीक्षणहरू प्रभावकारी रूपमा प्रशिक्षित गर्ने प्रशिक्षकहरूको लागि लागत र व्यावसायिक मद्दतको कुनै पनि चीजको लागि महत्त्वपूर्ण।
तपाईंले परीक्षण लिनुभन्दा अघि, यो आशा गर्न अत्यावश्यक छ कि आशाको लागि परीक्षा लिनको लागि कुनै आधार योग्यता छैन। यद्यपि, CCNA रूटिङ र स्विचिङ एक अर्काको लागि आधार हो। यो धेरै कम मांग को रूपमा देखा पर्यो र तपाईंलाई अधिक समस्यापूर्ण परीक्षाहरू खाली गर्न सक्षम हुनेछ।
नौ विविधता विशेषज्ञता क्षेत्रहरूको साथमा हेर्नको लागि, परीक्षा खाली गर्नका बाधाले तपाइँलाई इलाकामा कति अनुभवी अनुभव गरेको छ।
CCNA अनुदेशात्मक कक्षाहरू र मोड्युलहरू परीक्षणको प्रयास गर्नु अघि पाठ्यक्रम अझ राम्रो बुझ्न मौलिक छन्
वास्तवमा, एक आईटी प्रोफेसर जसले खेतमा संलग्नताको धेरै लामो समयको छानविन गर्न विचार गर्न र अन्वेषण डिजाइन बुझ्न विचार गर्नुपर्छ। यसले एक प्राथमिक प्रयासमा योग्य गर्न सक्षम गर्नेछ।
धेरै अभ्यास परीक्षाहरू लिनुहोस्, यो सबै भन्दा राम्रो सुझाव हो। यसले तपाईंको रिक्ततालाई तीव्र बनाउन मद्दत गर्दछ, छिटो जवाफहरू पठाउँदछ र बिना कुनै महसुस बिना वर्षको परीक्षाको अन्त्य गर्न सेट अप गर्नेछ।
1000 को योगको लागि परीक्षण निर्देशित हुन्छ यसले तपाईलाई योग्यता गर्न 825 स्कोर गर्नु पर्छ।
भन्दा कम, 30 मिनेटहरू दिन दिन बिताउन पुस्तकहरू प्रतिमार्जन गर्न को लागी को रूप मा राखन को लागी अवधारणात्मक सिक्नको लागि आधारभूत आधार हो। CCNA प्रमाणीकरण। बन्द मौका छ कि तपाइँ कुनै पनि विषयहरू समस्याको खोजी गर्नुहुन्छ, थप ऊर्जा लगानी गर्न वा भरोसायोग्य तैयारी स्थापनामा सामेल हुनुहोस्। वेबमा नि: शुल्क परीक्षणहरू खोज्नुहोस् र हप्तामा हप्ता प्रयास गर्नुहोस्।
धेरै अन्य व्यावसायिक प्रमाणीकरण प्रोग्रामहरूसँग सन्तुलित, सिस्कोद्वारा CCNA यस आधारमा कठिनाइको रूपमा हेर्नु भएको छ कि यसले व्यक्तिलाई पृथ्वीमा प्रचुर मात्रामा तल र सायद आफ्नो क्षेत्रमा अवधारणात्मक जानकारी पनि आवश्यक छ। कुनै पनि अवस्थामा, जब तपाईं विचार बुझ्न र जबरदस्त अध्ययन डिजाइन पछि लाग्नु भयो भने, यो वास्तविक परीक्षणमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन सरल छ।
साथै, विश्वभरका वास्तविक संस्थाहरू लगातार उनीहरूको समूहमा सामेल हुन ग्यारेन्टी व्यवस्थित पेशार्थीहरूको खोजी गर्दैछन्। यो वायरलेस प्रणाली प्रशासन डिजाइन, सुरक्षा मास्टर वा डाटा सेन्टर प्रशासक हुनुहोस्, विस्तृत कामका भागहरु एक व्यापक स्थान छनौट प्रदान गर्दछ। क्रियाकलाप क्षमता र विकास विकास द्वारा प्रदान गरिएको सिस्कोCCNA प्रमाणीकरण वास्तवमा परीक्षाको लागि आफैलाई स्थापित गर्न समय बिताएको समयलाई वैधानिकता दिन्छ।
सिस्कोको डाटा सेन्टरमा नयाँ के हो - CCNA डेटा केन्द्र
10 को लागि शीर्ष 2018 क्लाउड प्रमाणपत्र